Famoronana Origamiera 10 manamarika | Famoronana an-tserasera
Na dia omaly 11 novambra aza, ny andro ofisialy tany Japon, ary, hoy ny fitenenana, Aleo tara toy izay tsy mbola nisy, ary bebe kokoa raha nandany andro iray fotsiny ianao tamin'ny toerana an-tserasera izay mahazatra anay, ary tianay ny handefa ireo tolo-kevitra famoronana mahaliana indrindra mba hahafahan'ny aingam-panahy hidina ao an-tsain'ny mpamorona izay mitady zavatra hakana fototra hilazana ny tenany miaraka amin'ny azy.
Ity andro ity dia tena manokana any amin'ny firenena Japoney, satria teo no nisy ny taratasy sy ireo vala ireo mariky ny fandriam-pahalemana. Saingy toy ny mitranga matetika dia tsy ny firenena izay misy fifehezana no misy ifandraisany indrindra amin'ny tena namoronana azy. Avy eo, ho fantatrao izany raha afaka manakaiky ny asa mahatalanjona folo tratra miaraka amin'ity fomba manokana hikarakarana taratasy ity ianao.
Ny zavakanto Japoney taloha momba ny Origami, izay ny andraikitra no mpandray anjara fototra, no voatonona voalohany tao amin'ny tononkalo nataon'i Siakaku tamin'ny 1680. Tany Eropa, 100 taona taty aoriana, ny pedagogue Friedrich Fröbel, tao amin'ny sekolin-jaza ho an'ny ankizy, dia naka kajy matematika tsotra maromaro hamoritra taratasy vitsivitsy. Ity rafitra ity dia nafarana tany Japon tamin'ny 1870 ary fototry ny eritreritsika ankehitriny ho Origami moderina.
Momba ny Origami izay nananantsika firaketana maro izay namela anay manakaiky ny kanto mahafinaritra an'ny mpanakanto Eric Joisel na ho Hoàng tenany izay ananantsika ihany koa amin'ity andiany ity misy ny origami 10, izay ohatra tonga lafatra roa amin'ny zavatra azo tratrarina miaraka amin'ity fifehezana ity. Etsy ambany, ho hitanao ny filokana 10 izay mampiseho ny halaviranao amin'ny faharetana kely, teknika an-taratasy ary famoronana lehibe. Origami amin'ny fotony rehetra amin'ity Alakamisy mangatsiaka amin'ny Novambra ity.
3 Jeneraly Hagiwara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Famoronana mahatalanjona 10 hankalazana ny Andro Origami